ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ပထမအကြိမ်အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ | University of Yangon
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ပထမအကြိမ်အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ
မကြာမီတွင် သက်တမ်း နှစ် ၁၀၀ ရှိလာတော့မည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြုပြင် မွှမ်းမံရေးနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့က ဦးဆောင်၍ မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရေတို (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ရေရှည် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ရည်မှန်းချက်များနှင့် Master Plan ကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကော်မတီ (Software Committee) နှင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ (Hardware Committee) တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အမီ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ရေတို ရည်မှန်းချက်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့အကောင် အထည်ဖော်ရာ၌ နိုင်ငံတော်၏ပံ့ပိုးမှုအပြင် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များ၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပရောက် ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘများ၊ မြို့မိမြို့ဖများထံမှ ပါဝင်လှူဒါန်းမှုကိုပါ လက်ခံပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့် တင်ရေး ပထမအကြိမ်အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၄-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁) နာရီတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဝိဇ္ဇာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြုပြင်မွှမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကော်မတီဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ဘာသာရပ် ဌာနအသီးသီးမှ ဖိတ်ကြားထားသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများ၊ အလှူရှင် များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပထမအကြိမ်အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတွင် အလှူရှင် (၃၂) ဦးထံမှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း (၂၀၅) သိန်းကျပ် တိတိကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
အလှူငွေများကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်သည့် အပြင် အောက်ဖေါ်ပြပါ ဘဏ်စာရင်းများတွင်လည်း ပေးပို့ထည့်ဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
(၁) AYA Bank (Account No.: 0134202010077100)
(၂) CB Bank (Account No.: 0107600100074063)
(၃) KBZ Bank (Account No.: 021-304-02105875501 (KANBAWZA BANK Ltd (KMY))
(၁) AYA Bank (Account No.: 0134102030005487)
(၂) CB Bank (Account No.: 0107101200024357)
(၃) KBZ Bank (Account No.: 02110902105875501)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ပါမောက္ခချုပ်ရုံး (ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၃၄၃၁၈၊ ၀၉-၈၆၀-၂၀၅၇)
ဒေါက်တာဥမ္မာကျော်၊ ဒု-ပါမောက္ခချုပ် (ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၁၄၉၁၀)
ဒေါက်တာအောင်ကျော်၊ ဒု-ပါမောက္ခချုပ် (ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၃၆၅၀၃)
ဒေါက်တာသောင်းထိုက်၊ ဒု-ပါမောက္ခချုပ် (ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၉၆၆၉၈၆၁)
ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်၊ ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (၀၁-၅၀၅၆၁၂)
လှူဒါန်းငွေများအတွက် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲနှင့် အလှူရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲများကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် လစဉ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး လှူဒါန်းငွေအပြင် အဆောက်အဦ၊ သင်ထောက်ကူနှင့် လက်တွေ့ခန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ အားကစားသုံးပစ္စည်းများစသည်ဖြင့် လိုအပ်နေသော ပစ္စည်းများအပြင် ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီနှင့် လုပ်အားအလှူ တို့ကိုလည်း ပါဝင်လှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အလှူငွေပေးအပ်သည့် အလှူရှင်များစာရင်း
ရာထူး/ ဌာန/ ကုမ္ပဏီအမည်
၁ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၂ ဒေါက်တာအောင်သူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၃ မြန်မာနိုင်ငံရူပဗေဒအသင်း ၂,၁၀ဝ,၀ဝ၀
၄ (၈) ကြိမ်မြောက် ရူပဗေဒဆရာကန်တော့ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ၂,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၅ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ မဏိဇောတဓရ ဦးမောင်မောင်+သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီဒေါ်သက်သက်နိုင် ဥက္ကဌ၊ Asia Express ကုမ္ပဏီများ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံရူပဗေဒအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ၂,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၆ ဦးဇော်ဇော်အောင် (၈၈) ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၇ စိမ်းလန်းကမ္ဘာကုမ္ပဏီ စိမ်းလန်းစိုပြည်ပန်းခြံ ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၈ All LLB(UY) (၁၉၈၁-၂၀၁၈) ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၉ ဦးမောင်မောင်လတ် ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ (YESB) ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၁၀ ဒေါ်စန္ဒာခင် ဒုဝန်ကြီး (ငြိမ်း)၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန။ ဓာတုဗေဒဆရာမဟောင်း ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၁၁ ဦးလှသိန်း ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဓာတုသိပ္ပံအသင်း ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၁၂ ဒေါက်တာမြတ်ကျော်သူ ပါမောက္ခ၊ ဓာတုတဗေဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၁၃ ဦးထိန်လင်းဦး (ခ) James (LLB) Advocate, Myanmar Partner, MyanmarTrademark & Patent Law Firm ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၁၄ ဗိုလ်မှူးကြီးသက်နိုင်၊ ဒေါ်မော်မော်ခိုင် ဓာတုဗေဒကျောင်းသူဟောင်း ၃၀ဝ,၀ဝ၀
၁၅ ဒေါက်တာသီတာမင်းညီ ကထိက၊ တက္ကသိုလ်များသိပ္ပံသုတေသနဌာန ၂၀ဝ,၀ဝ၀
၁၆ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဒဿနိကဗေဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၁၀ဝ,၀ဝ၀
၁၇ Daw Kathleen Thein English Teacher's Trainer ၁၀ဝ,၀ဝ၀
၁၈ ဦးမျိုးမြင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် (ငြိမ်း) ၁၀ဝ,၀ဝ၀
၁၉ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ခိုင် အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းသားဟောင်း ၁၀ဝ၀ဝ၀
၂၀ ရန်ကုန်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများအသင်း ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၂၁ 86 Batch တက္ကသိုလ် သင်္ချာဆရာမများ ၉၀ဝ,၀ဝ၀
၂၂ ကောင်စုစံပညာ့ရိပ်မွန် ၁၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၂၃ ILBC ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၂၄ ပြည်သူ့နီတိပန်းပျိုးခင်း ဘညိုစာပေ ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၂၅ ဦးနေအုပ် Chairman နေ ပညာရေးဖောင်းဒေးရှင်း ၁,၀ဝ၀,ဝ၀ဝ
၂၆ PTA ရန်ကုန် ၅၀ဝ,၀ဝ၀
၂၇ ဒေါ်ညိုညိုဝင်း ပထဝီကျောင်းသားဟောင်း ၂၀ဝ,၀ဝ၀
၂၈ ဒေါ်သန်းသန်းမော် ပထဝီကျောင်းသားဟောင်း ၁၀ဝ,၀ဝ၀
၂၉ ဒေါ်ထက်ထက်အောင် Private Teacher ၁၀ဝ,၀ဝ၀
၃၀ သင်္ချာဌာန (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ၃၀ဝ,၀ဝ၀
၃၁ ဦးမင်းနောင် + ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရွှေအိမ်ကမ္ဘာဆောက်လုပ်ရေး ၂၀ဝ,၀ဝ၀
၃၂ မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း ၂၀ဝ,၀ဝ၀